सामि पिदार तथा नयाँ वर्ष येले थोचे ५०७६ – Sunuwar.org
हिन्दू संंस्कारमा लोग्ने पूजा, गुरु पूजा हुन्छ । साथै कालीको पूजा गर्ने भनेर निर्वस्त्र कन्य केटीको योनी पूजा गर्ने चलन छ । अनि बुबाआमाको मुख हेर्ने तिथि पनि निर्धारण गरिएको छ । तर नारी पूजाको कतै उल्लेख छैन । बरु नारी देवी हुन् । नारी शक्ति हुन् । नारी धर्ती हुन् भनेर फुक्र्याउने काम गरिन्छ । अहिले मनाउने गरेको फेब्रुअरी ८ नारी दिवस कुनै चाड होइन । तर किरात कोइँचमा प्रत्येक वर्ष माघ अर्थात् ङारिच १ नाबु (गते) चेलीबेटीको पूजा गरिन्छ । यस दिन महिलाको सम्मान स्वरुप कोइँच सुनुवारहरुले छोरीचेलीको पूजा गर्छन् । विहानै पानीको मूलमा गई मुख धुन्छन् । ढुङ्गाको प्रतिमा बनाउँछन् अनि फुको धागोेले त्यो प्रतिमालाई सात फन्को बाँधी माइ वा धर्तीमाताको प्रतिमा मानेर बनतरुल तथा अन्य फलाहार चढाई प्रकृति पूजा गरिन्छ र सुख, शान्ति, समृद्धिको बर मागिन्छ । त्यही बर मागी पितृ भाकेर घरमा बनतरुल ल्याइन्छ । छोरीचेलीको पूजा गरिन्छ । कालो मासको दाल, गेडागुडी, चामल पातको बोहतामा राखेर दाही चामलको टिका लगाएर दक्षिणा दिई मिठा मिठा खानेकुरा खुवाइ पूजा गर्ने परम्परागत चलन छ । यसै दिन फापर (तिते, मिठे) को रोटी, आप्mनो वरिपरि पाइने अन्य कन्दमूल खाने चलन छ । सम्भवतः जाडोको मौसम भएर होला गेडागुडीको परिकार र कन्दमूल खाने चलन चल्दै आएको हो ।
सुनुवार विद्यार्थी समाज केन्द्रीय समिति कोटेश्वरले गएको साता दाता सम्मान तथा येले थोचे ५०७६ को शुभकामना आदनप्रदान कार्यक्रम र एक दुई जना सचेत कोइँच सुनुवार मित्रले सामाजिक सञ्जालमा शुभकामना लेखन राखे बाहेक सामि पिदार तथा नयाँ वर्ष येले थोचे ५०७६ को कहीँ कतै चर्चा छैन । न त त्यस सम्बन्धि कुनै कार्यक्रम नै आयोजना गरिएको छ । मर्न लागेको धुक्धुकी लिएर सुनुवार सेवा समाज काठमाडौं जिल्ला समितिले गत वर्ष सगरमाथा टेलिभिजनबाट रु. १५००० तिरेर कार्यक्रम नै प्रसारण गरे पनि यो वर्ष त्यति चासो लिएको छैन । पोहर साल भव्य कार्यक्रम गर्ने साथीहरुले यस वर्ष के गर्ने भन्ने चासो राख्नु पर्ने, तर त्यसो गरेको पाइएन । किन होला सोची रहेको छु । थाहा नपाउनेले त कुनै कार्य गर्ने भएन तर थाहा पाउने किन चुप लागे ? यो सोचनीय विषय हो कि होइन ? एक्लै गम्दै छु ।
विगतमा हिन्दू धर्मको श्री पञ्चमीलाई नयाँ वर्ष भनेर सुनुवार सेवा समाजले नै बनभोज आयोजना गरी केक खुवाउने कार्यक्रम गरेको थियो । त्यस कार्यक्रममा मै हुँ भन्नेहरु खुब रमाउँथे । तर सुनुवार सेवा समाजले हिन्दूहरुको श्री पञ्चमी कोइँचको नयाँ वर्ष नभएको ठहर गरेको छ । साहित्यकार बैरागी काइँलाको संयोजकत्वमा गठित येले सम्बत् अध्ययन समितिको विशेष अनुसन्धानबाट कोइँच लगायत किरातीको नयाँ वर्ष श्री पञ्चमी कोइँचहरुको नयाँ वर्ष होइन भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
कोइँच बस्तीमा माघको दिन कोशीमा गएर नुहाउने र कालो पाठी तथा परेवा बली दिएर खादिमुदी (माइ) पूजा गर्ने गरिन्छ । रोटी चोइनिमि । यसरी माइ पूजा गर्दा जिउमा खटिरा नआउने, ज्वरो नआउने र देशान महामरी हट्ने विश्वास पनि गरिन्छ । यही कोशी पूजालाई रजगाउँका माझीहरुले लदी पूजा भनेर नदी पूजा गर्ने चलन पनि छ । यसैले कोइँचमा ङारिच १ नाबु सुख, शान्ति, समृद्धि तथा चेलीमाइतिको गाढा सम्बन्धको लागि पनि महत्वपूर्ण छ ।
जे होस् अरुले जे गरुन् जसो गरुन् । सामि पिदार र येले थोचे ५०७६ को अवसरमा दुई जना कोइँच सामिबु भने लागि पर्नु भएको छ । सुनुवार सेवा समाजको केन्द्रीय सदस्य तथा सुनुवार सेवा समाज जिल्ला समिति काठमाडौंको कोषाध्यक्ष शोभा सुनुवार र सुनुवार सेवा समाज दोलखा जिल्ला समितिका सल्लाहकार, प्रतिभाशाली जुझरु पहिचानप्रेमी कोइँच युवा जीवनकुमार सुुनुवार किरातको विशेष पहलमा पर्सी ङारिच १ नाबु ५०७६ तदानुसार २०७२ माघ महिना १ गते इस्वी सम्बत् २०१६ जनवारी १५ का दिन सुनुवार सेवा समाजको भवन कोटेश्वरमा विशेष शुभकामना कार्यक्रम आयोजना गरेको छन् । यस खुशीयालीमा सबैलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दै कोइँच सुनुवारहरुको महान चाड सामि पिदार तथा नयाँ वर्ष ५०७६ को पवन अवसरमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सुख, शान्ति, समृद्धि हार्दिक शुभकमना व्यक्त गर्दछु ।
« बाँदो (कथा)
सबै चाड सिर्जित नै हुन, तामिसामिलाई टिका लगाएर शुभाशिर्वाद दिँदै येले थोचे सम्पन्न »